महालेखाको कर्मकाण्डी प्रतिवेदन | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय महालेखाको कर्मकाण्डी प्रतिवेदन
on: April 15, 2019 सम्पादकीय
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारले गरेको खर्चमध्ये रू. १ खर्बभन्दा बढी बेरुजू भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । महालेखाको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले १ हजार २०० ओटा सुझाव दिएर विगतकै शैलीलाई निरन्तरता दिएको छ । महालेखाले देखाएको बेरुजूमाथि खासै कारबाही भएको छैन र यसले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भएको पनि पाइन्न । त्यसैले बेरुजूको रकम प्रतिवर्ष बढ्दो छ । महालेखाको प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन हुन्न त ?
आफूले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्ने वा निर्देशन दिनेजस्ता काम गर्ने अधिकार महालेखालाई छैन । त्यसैले यो कर्मकाण्ड जस्तो बनेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले सरकारी खर्चमा हुने विभिन्न समस्या र बेरुजू उल्लेख गरेको हुन्छ । तर, त्यो प्रतिवेदन लागू गर्न बाध्य पार्ने कुनै संयन्त्र छैन । आफूले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्ने वा निर्देशन दिनेजस्ता अधिकार महालेखालाई छैन । त्यसैले यो कर्मकाण्ड जस्तो बनेको छ । प्रतिवेदन तयार पार्ने शैली पनि कर्मकाण्डी पाराकै छ, जसले गर्दा कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन । हुन त सुझावको कार्यान्वयनमा बेरुजू अनुगमन मूल्यांकन समिति बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, तर समितिले पनि यसलाई कर्मकाण्डकै रूपमा लिएको पाइन्छ । बेरुजू असूलउपर गर्ने केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले समेत प्रभावकारी काम गरेको पाइन्न । सरकारले बेरुजूलाई गम्भीरताका साथ लिएको भए यो कम हुँदै जान सक्थ्यो, तर यसलाई बेवास्ता गर्दा बेरुजू बढेको छ र भ्रष्टाचार गर्न सहज भएको छ ।
कुनै कम्पनीको लेखापरीक्षणमा यस्ता सुझाव दिइयो भने कम्पनीले त्यसलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्छ । तर, सरकारले भने महालेखाको प्रतिवेदनलाई काग कराउ“दै छ पिना सुक्दै छ भनेजस्तो गरी लिने गरेको छ । अर्थात्, त्यसलाई कत्ति पनि गम्भीरताका साथ लिएको पाइन्न । बेरुजू नघट्नु नै यसको उदाहरण हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नीतिगत बदमासीका कुराहरू उठाएको छ । उदाहरणका लागि चिनीको प्रसंगलाई लिऊँ । तर नीतिगत बदमासी गरेबापत कुनै पनि अधिकारीलाई दण्डित गरिएको वा कारबाही गरिएको पाइन्न । जे गरे पनि कारबाही भोग्नु नपर्ने अवस्था भएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कामलाई कर्मकाण्डी नभने के भन्ने त ?
लेखापरीक्षण गर्दा सरकारी खर्चमा देखिएका त्रुटि नसच्याउने हो भने आर्थिक अपचलन बढ्न सक्छ । यसका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो, उसले लेखेका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । बेरुजू भ्रष्टाचार होइन, तर यसले भ्रष्टाचार गर्न सजिलो बनाउँछ । त्यसैले महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि यसबारे अध्ययन गर्र्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएको पाइँदैन । बरु, सरकारले प्रतिवेदनका आधारमा आफूलाई मन नपरेका मान्छेलाई कारबाही गर्ने आधार भने बनाएको पाइन्छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन लागू भए नभएको हेर्ने निकाय छैन भन्दा पनि हुन्छ । संसद्को लेखासमितिले यसको अध्ययन गरेर केही निर्देशन दिने गरेको पनि छ, तर त्यो निर्देशनमा मात्रै सीमित भएको पाइन्छ । महालेखाले बजेट बाहिरबाट विदेशी सहायता लिएको कुरालाई बारम्बार उठाउने गरेको छ, बदमासी हो भनेको छ । बजेट वक्तव्यमा समेत यस्तो सहायता नलिने भनिन्छ, तर व्यवहारमा लागू भएको छैन । त्यस्तै बन्द भएका सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूलाई तलब दिइरहेको कुराको विरोध भए पनि सरकारले त्यसलाई रोकेको छैन । कृषिलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने जस्ता कतिपय विषयमा भने महालेखाको मौनता अचम्मलाग्दो देखिन्छ ।
महालेखाले दिएका कतिपय सुझाव कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक समस्या पनि देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कानूनी अड्चन छ भने त्यसमा संशोधन गर्नुपर्छ । तर न संशोधन गरिन्छ, न त कार्यान्वयन नै गरिन्छ । यसरी मुलुकको खर्चको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै जाने हो भने भोलि बेरुजूका कारण भ्रष्टाचार भयावह नबन्ला भन्न सकिन्न ।